अहिलेको अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि नबढाउन डा. केसीको चेतावनी::Pathivara News
अहिलेको अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि नबढाउन डा. केसीको चेतावनी
काठमाडौ ,भदौ ३/
प्रा. डा.गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि नबढाउन चेतावनी दिएका छन् । जालझेलपूर्वक अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित गर्ने प्रयास गरे सत्याग्रहसहित विरोधका कार्यक्रम शुरु गर्ने डा। केसीको चेतावनी छ ।